Somtel Oo Si Toos Ah Internet-ka HCTV Uga Baahinaysa Ciyaaraha Paskit-Ka Ee Ka Soconaya Uganda | Somaliland.Org
April 26, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Adeegga Internet-ka ee Shirkadda Somtel ayaa warbaahinta u sahlay inay si taasa [live] hawada ugu galiyaan warbaahinta wararkooda marka ay dirayaan iyaga oo aanay wax dhibaato kala kulmin haba yaraatee .
Warbaahintii live-ka ahyd ee ugu dambeysay ee ay shirkadda Somtel ku caawisay warbaahinta waxaa ugu dambeeyey ciyaarihii Paskit bolka ee ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Ugand taasi oo dhexmaraysaydalalka Somaliland iyo Kenya.
Telefeeshinka Horn Cable ayaa maanta si toos ah looga daawanayey ciyaartii labda dalka ee Somaliland iyo Kenya ku dhexmaraysay magaalada Kampala, waxaana TV-ga Horn Cable arrintaasi u suurto galiyey adeegga casriga ah ee shirkadda Somtel kaasi oo warbaahinta suurto gal uga dhigaya inay si dhibyar hawada ugu diraan qaybaha kala duwan ee wararkooda ay ka dirayaan dalka gudihiisa.
Barnaamijkan tooska [live] ka ah ee ay Somtel warbaahinta ku caawinayso maaha kii ugu horeeyey ee ay warbaahintu adeegsadaan balse barnaamijkani waxa uu ahaa mid soo jiray tan iyo bishii May ee sanadkii la soo dhaafay xafladdii xuskii 18 May ee lagu dhigayey xarunta Madaxtooyada Somaliland kaasi oo ay warbaahintu diridda wararkooda u adeeggsanayeen Internet-ka casriga ah ee shirkadda Somtel.
Shirkii caalamiga ahaa ee ay waxbarashada gaar ahaan Jaamacadaha ee mandiqadda lagaga hadlo Afka Somaliga ee ka dhacay Hotleka Maan-soor ee magaalada Hargeysa kaasi oo ay soo qaban qaabisay Hay’addii kacday ee EDC shirkadda Somtel waxay warbaahinta u sahashay inay wararkooda sidan oo kale hawada [Sattalet-ka] ugu diraan iyaga oo adeeggsanaya isla barnaamijkan casriga ah ee Internet-ka Somtel.
8-bishan aan ku jiro ayey ahayd markii uu Hotelka Maansoor ee magaalada Hargeysa ka furmay shirweynihii 1aad ee urur-siyaasadeeddka Waddani halkaasi oo lagu soo bandhigayey adeegga casriga ah ee Somtel ee Internet-ka kaasi oo guud ahaamba dhacdooyinkii madasha ururkaasi si toosa loogadaawanayey daafaha dunida gaar ahaan Telefeeshinka Horn Cable isaga oo adeegg sanayey adeegga Live-ka ah ee shirkadda Somtel.
Dhanka kale 14kii bishan waxaa isla Hotelka Maansoor ee magaalada Hargeysa lagu qabtay shirweynihii 3aad ee Golaha dhexe ee Xisbiga Kulmiye waxaanu sidookale Xisbigaasi wahlihiisa dhanka baahinta ee wararka u adeeggsanayey Internetka shirkadda Somtel.
Isku soo wada duub oo adeegga casriga ah ee Internet-ka shirkadda Somtel waxa uu Somaliland ka dhigaty mid lamida waddamada kale ee horey uga maray isticmaalka adeegga Internet-ka gaar ahaan dhinaca warbaahinta ee adeeggisga Internetka Somtel.
Previous PostWasaaradda Warfaafinta Somaliland oo markii u horeysay samaysatay qorshe iyo siyaasad cadNext PostWasiirka Kalluumaysiga Iyo Hoggaanka KULMIYE oo Wefti Shiine ah geeyay shirkada sharaabka ee SBI	Blog